नयाँ रुट, तस्करीको तरिका पुरानो नै, सशस्त्रको मिलेमतो | Citizen Post News
नयाँ रुट, तस्करीको तरिका पुरानो नै, सशस्त्रको मिलेमतो
२०७७ भदौ २५ गते १९:४५
रुपन्देही । नेपालबाट तस्करी गरि लगेको ८४ बोरा अनुदानको मटरदाल भारतीय एसएसबीले भदौ १३ गते सीमावर्ती बजार ठोठरीबाट नियन्त्रणमा लियो । त्यस अघि नवतनवाबाट नेपाल ल्याउदै गरेको प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित दुई नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले केहिबेर नियन्त्रणमा लिएर ८० हजार रुपैयाँ लिएर उम्कायो ।
भदौ २० गते राति ११ बजे सम्मरीमाई गाउपालिका-७ हर्दीबाट साईकलमा बोकेको ३५ हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरको ६ क्वीन्टल बेवारिसे मटरदाल ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारको टोलीले फेलापारी भन्सारलाई पठायो । तर भारतबाट भन्सार छलि ल्याउदै गरेको एक गठिया कपडा नियन्त्रणमा लिएको सादा पोशाकका सशस्त्र प्रहरीले भदौ १६ गते बेतकुईयाँबाट छाडिदिए ।
तरैनी नाका हुँदै भारतको ठोठरी बजारबाट प्रतिदिन ठूलो मात्रामा कपडा लगायतका बस्तु नेपालमा तस्करी हुने गरेको छ ।
तस्करीको सामान बोगदिया हुँदै नदी पारगरि महिलवार, सुर्यपुरा, छपिया र बुटवल लगायतका बजारसम्म पुर्याईन्छ । तस्करीका लागि सशस्त्र प्रहरीको पनि लाईन हुन्छ । हप्तवारी बुझाउन एक दिन ढिलो भएकोले लखेटदै आएका सशस्त्र प्रहरी बल दुई मोहानका दुई जना प्रहरीले बिजगढवा गाउँ पार गर्न नपाउँदै समातेपछि ५ सय रुपैयाँ बुझाई उम्केको नाम उल्लेख गर्न नचाहने सम्मरीमाई ५ थुम्हवाका ती तस्करले बताए ।
बि.सं.२०६४ मा रक्तचन्दन तस्करीका लागि चर्चित रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारस्थित बिभिन्न सीमा नाकाबाट मटरदाल, छोहारा, सुपारी, कालो मरिच र कष्मेटिक्स सामानको अवैध निर्यात उच्च हुछ । सीमापारिबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध कपडा, निनी, चौपाया र पन्छीजन्यबस्तु लगायतको अवैध आयात पनि उत्तिकै छ ।
साइकल, मोटरसाईकल, ट्याक्टर र पिकअप भ्यानबाट खुलेआम तस्करी भईरहदा प्रहरीले कमै मात्र रोक्ने प्रयास गरेको स्थानियको गुनासो छ । रात पर्न साथ अर्थात रातको दश बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म तस्करीका सामानसहित साईकल, मोटरसाईकल, ट्याक्टर र पिकअप भ्यानहरु हुईकेको देखिन्छ । अजमा, तरैनी, मुडिला, करौता, बंसीडिहवा, पचवारे, कन्चनपुर सीमा नाकाबाट मटर, सुपारी, छोहारा, कालो मरिच र कष्मेटिक सामानको अवैध निर्यात हुने गरेको छ ।
बगौली, ठर्की र कदमहवा नाकालाई पनि पशुपन्छी र औषधिजन्य बस्तुको तस्करी हुन्छ । खनुवा, त्रिलोकपुर र पर्सिया नाका सबै प्रकारका तस्करीका साथै लागूऔषधकालागि प्रशिद्ध छ । मर्चवारको मुडिला तरैनी र करौता नाकाबाट चौपायाको तस्करी निर्बाध रुपमा भइरहेको छ । सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले प्रत्येक भैंसी लगायतका चौपाया तस्करबाट मासिक दश हजार असुल्ने गरेको सोही कार्यमा संलग्न परमहंस कहारले बताए ।
उनका अनुसार सो क्षेत्रमा चारजना चौपाया तस्कर सक्रिय छन् । परमहंसले बताए अनुसारको दृश्य भदौ २५ गते दिउँसो ११ः३० बजे देखियो । जब आधा दर्जन पाडा लोडगरि भारतीय बजारबाट दुईमोहान हुँदै गइरहेको लु.२ च ७०२८ नं. को पिकअप भ्यानलाई सशस्त्र प्रहरीले त्यसै उम्कायो । प्रहरीले भ्यान रोक्न साथ ड्राईभरले जुम्मनको माल बताएपछि बिना कागजपत्रको छाडिएको थियो ।
लकडाउनसँगै बाक्लो रुपमा सीमा निगरानीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले तस्करी गराए बापत ठूलो रकम असुल्ने गरेको स्थानियको आरोप छ । रुपन्देहीको ‘सीमास्तम्भ नं. ३०, ३१ र ३२ बाट सशस्त्र प्रहरीले खुलेआम रकम असुल्ने गरेको कमलेश यादवले बताए । उनले भने, ’भारतबाट ल्याइने खाद प्रतिबोरा ५०, मटरदाल भारत पठाएको प्रतिक्वीन्टल पाँच सय लिने गरिन्छ । त्यसैगरी, सीमामा रहेका सशस्त्र प्रहरीको अन्य असुली सूची बमोजिम हुन्छ ।’
सावन १६ गते शुक्रबार दिउँसो २ः३० बजे सीमास्तम्भ नं.३० नजिक पहरामा रहेका सशस्त्र प्रहरीले ६१ सिसी मदिरा भारत लगेबापत आठ सय र एक सिसी गोल्डेन मदिरा असुलेका भारतीय मदिरा तस्कर इसराज पासीले बताए । अर्को दिन शनिबार १७ गते दिउँसो ५ बजे सोही प्रहरीले भारत गइरहेका यु.पी. ५६ जेड ०४११ नं. को एक मोटरसाइकल चालकबाट पाँच सय असुलेको स्थानियले बताए ।
३१ नम्बर पिलर रहेको मुडिलामा लकडाउन र सीमा बन्दको कुनै असर देखिदैन । स्थानीयबासीका अनुसार गाउँमा दिनभरी थुपारेको मटरदाल लगायतका सामान रातभरी सीमापार हुने गर्दछ । ३२ नं.सीमास्तम्भ वरपरको हाल पनि उस्तै छ । तरैनी नाकाबाट मटरदाल, हार्डवेअरका सामान, छोहारा, चीनी, कष्मेटिकका सामान तथा कृषि उपज चामल र गहुँलगायतका सामाग्री सशस्त्र प्रहरीकै सामुन्नेबाट तस्करी हुने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानी तथा निर्देशनमा तस्करी मौलाएको सम्मरीमाई ३ का अरुण सहनीले बताए । उनले भने,‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख हेमकुमार थापाको सरुवा र नयाँ एसपीको आगमनसँगै नेपाल प्रहरीले जति कडाई गरेपनि तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’ सीमा सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरीले चाहने हो भने कुनै पनि बस्तुको तस्करी सम्भव नहने उनले बताए ।
लम्तिहवा-लुम्बिनी, दुइमोहान-झुलनीपुर, गोनहा-बनगाई र बेथरी तस्करीका सुरक्षित बाटो हुन् । दानव नदीमा पानी घटेपछि बोगदियाघाट पनि तस्करीको सुरु भएको छ । भारतबाट अवैध आयातित सामान प्राय यहि बाटो हुँदै सुर्यपुरा, छपिया, बुटवल र भैरहवा बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । नेपाली निर्यातका सामान पनि यिनै बाटो भारतीय सीमा नाकासम्म सुरक्षित पुग्ने गरेको बताइन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एक पूर्ब प्रहरी अधिकृतका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धि लागूऔषध रुपन्देहीका बिभिन्न सीमानाका हुँदै रातारात पोखरा र काठमाडौं लगायतका बजारसम्म पुर्याइन्छन् । राजश्व छलिका अनेक घटना छन्, मदिरा र मटरदाल प्रतिदिन हजारौं क्वीटल मर्चवार धकधई र लुम्बिनी क्षेत्रबाट सीमापार जादैछन् तर सीमा नाकामा रहेका प्रहरी युनिटहरु असुलीमै ब्यस्त छन् ।
रुपन्देहीमा मदिरा, मटर र लागूऔषधको चर्चा चुलिएपछि तस्करले बाटो परिवर्तन गरेको देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा मदिराजन्य पदार्थ तथा मटर र छोहारा ओसारपसारमा रोक लगाएपछि तस्करले बाटो परिवर्तन गरेका छन् । भैरहवा-लुम्बिनी सडकखण्डको बनगाई हुँदै मर्चवारका बिभिन्न नाकाबाट हुने तस्करीका सामान यतिबेला भैरहवा-लुम्बिनी सडकखण्डको झुलनीपुर-दुईमुहान तथा खुनगाई-लम्तिहवाको भित्री बाटोबाट बिभिन्न सीमानाका हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेको छ ।
झुलनीपुर हुँदै मर्चवार भित्रिने सुपारी, छोहारा, मटरदाल र कस्मेटिकका सामानसहितको पिकअप भ्यान र ट्याक्टर पनि साझ पर्न साथ दुईमुहान चोक र मर्चवार सडकमा देखिने गरेको स्थानियको भनाई छ । स्थानियका अनुसार राति दश बजेपछि बिहान चार बजेसम्म यस्ता अबैध गतिबिधि प्रायः हुने गरेका छन् । लकडाउनका समयमा मदिराजन्य बस्तु यहि नाका हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
मदिराजन्य बस्तु बन्देजका समयमा पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुखकै मिलोमातोमा भैरहवाका मदिरा ब्यवसायीले यहि बाटोबाट लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको मुजहना, लम्तिहवा र कोटहीमाई गाउँपालिकाको बोगदिया लगायतका गाउँमा स्टोर गरेर राखेका थिए । यसअघि प्रहरी प्रशासनका प्रमुखहरुको मिलामितोमा ट्रक र ट्याक्टरमा हुने तस्करी यतिबेला स्थानिय प्रहरीको संलग्नतापछि साइकल, मोटरसाइकल, ट्याक्टर र पिकअप भ्यानमा हुने गरेको छ ।
रुट पनि बदलिएको छ । यद्यपि प्रहरीले मदिराजन्य रपन्छीजन्य बस्तु पटकपटक नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ । मटरदाल लगायतका सामान पनि नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाएको देखिएको छ । गोदामनै सीमा क्षेत्रमा रहेकोले सो ठाउँसम्म जान पाउने कानुनी अधिकार रहेकोले पनि नियन्त्रणमा कठिनाई रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
यसरी हुने सीमा तस्करी समयमै नियन्त्रण हुन नसके नेपाली किसान र ब्यावसायीहरु धरासायी हुने निश्चित छ । लागूऔषध सेवनकर्ताहरुको संख्या तथा अपराधमा उच्च बृद्धि हुने सम्भावना बढेको सामाजिक अगुवा, जानकार तथा ब्यावसायीले बताए ।